Suzhou Ocan Polymer အမျိုးအစားပစ္စည်း Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Suzhou OCAN Polymer အမျိုးအစားပစ္စည်း Co. , Ltd မှမှတ်ပုံတင်မြို့တော် 35 သန်းနှင့်အတူ Suzhou ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ OCAN 20 ကျော်နှစ်ပေါင်း (စာရွက်များ, လိပ်, ရုပ်ရှင်အပါအဝင်) PVC / ပေ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် OCAN 3500 တန်တစ်ဦးသည်လစဉ်စွမ်းရည်ရရှိ, 14 အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ပုံနှိပ်ခြင်း, ထုပ်ပိုး, စည်ထုပ်ပိုးပြီး, စာရေးကိရိယာ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှင့်ရေကုသမှုစက်မှုလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သောအသုံးချနေကြသည်။
OCAN အမြဲယင်း၏တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက "ရိုးသားမှု", "လက်တွေ့", "တီထွင်ဆန်းသစ်မှု" နှင့် "ဟုဦးဝင်း-ဝင်း" ၏ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ထိန်း။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ဒါပေမယ့်လည်းနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးမသာ။ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မှကြိုဆိုပါ၏!
suzhou Ocan Polymer အမျိုးအစားပစ္စည်း Co. , Ltd မှပရော်ဖက်ရှင်နယ် PVC နှင့်ပေထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ R & D အနှစ် 20, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်း experience.The ကုမ္ပဏီ extrusion & calerdering လိုင်းများတွင်ပါဝင်နေသည်။
SGS လက်လှမ်းမီမှု, ROHS နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်အားဖြင့် 2008 system ကိုလက်မှတ်နှင့်စမ်းသပ်ခြင်း: OCAN မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်, နည်းပညာမြင့်ထုတ်ကုန်များ, တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်လုပ်ငန်းများ, ISO9001 အမျိုးမျိုးရရှိသွားတဲ့။ နှစ်ပတ်လည် output ကိုတနျဖိုး 30000tons ။
PVC Frost စာရွက်စီးရီး
ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလက်စသတ်: ရတဲ့အရာတွေသို့မဟုတ် Matt / ဖောင်းကြွစာလုံး
700 * 1000mm, * 1400mm 1000, * 1220mm 915, * 1830mm 915, * 2000mm, * 2440mm 1220 သို့မဟုတ်ဖောက်သည် '' option ကိုအဆိုအရ 1000 ။
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမှကြိုဆိုပါ၏! ကျနော်တို့ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သင်တို့နှင့်အတူရှိရေရှည်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောကောင်းမကောင်းယုံကြည်စိတ်ချဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
အရည်အသွေးနိယာမ: ပြည်သူ့-oriented, ပါဝင်သူ, Excel, ဆန်းသစ်နှင့်ကျေနပ်
အရည်အသွေးပန်းတိုင်: ကုန်ပစ္စည်းအရည်အချင်းပြည့်မီသောနှုန်း> = 99%
ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု> = 78%
ထဲမှာအချိန် Delivery နှုန်း> = 98%
သို့ပြန်သွားနှုန်း <= 0.8%